सातामा १० अंकले बढ्यो शेयर बजार | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण सातामा १० अंकले बढ्यो शेयर बजार
on: January 11, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
सातामा १० अंकले बढ्यो शेयर बजार
करोबार रकममा सामान्य सुधार
पुस २७, काठमाडौं (अस) । सातामा नेप्से परिसूचक गत साताको अन्तिम दिनको तुलनामा १ दशमलव ९७ अंकले बढेको छ । साताको पहिलो दिन र अन्तिम दिनको तुलना गर्दा भने परिसूचक १० दशलमव शून्य ५ अंकले बढेको छ । साताको अन्तिम दिन अर्थात् पुस २६ गते परिसूचक १ हजार १ सय ८० दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । साताका पाँच कारोबार दिनमा तीन दिन परिसूचक बढेको थियो भने दुई दिन घटेर बन्द भएको थियो ।
यो हप्ता र गत हप्ताको तुलनामा बजार पूँजीकरण शून्य दशमलशव २७ प्रतिशतले बढेको छ । यो साता नेप्से सबैभन्दा उच्च १ हजार १ सय ८० दशमलव ८४ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने सबैभन्दा न्यून १ हजार १ सय ७० दशमलव ७९ विन्दुमा पुगेको थियो । यो साता ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स २ दशमलव शून्य ९ अंकले बढ्न पुगेको छ ।
नेप्सेको ‘क’ वर्गको सेन्सेटिभ इण्डेक्स सबैभन्दा उच्च २ सय ५० दशमलव ६५ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने न्यून २ सय ४८ दशमलव ५६ विन्दुसम्म पुगेको थियो । बैंकहरुबाट कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुले पुस मसान्तमा ब्याज बुझाउन पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले घाटामा वा थोरै नाफा भएपनि शेयर विक्री गर्न थालेपछि बजारमा घटबढ भएको थियो ।
गत हप्ताको तुलनामा यस हप्ता नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकम ४ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम रू. ७ करोड ४६ बढेको हो । साताको शुरुको दिन र अन्तिम दिनको तुलनामा भने कारोबार रकम १८ प्रतिशलते बढेको छ । पुस २२ गते रू. ३१ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो भने पुस २६ गते रू. ३६ करोड ६३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।
यस साताको कारोबार
टेवा तथा प्रतिरोध
आगामी पुस २९ बाट शुरु हुने हप्ताको लागि नेप्से परिसूचकको निर्णयक औषत तथा पिभट १ हजार १ सय ७८ दशमलव शून्य ४ रहेको छ । यो हप्ता नेप्से परिमाणको मूल्य रू. १ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो । जुन गत हप्ताको भन्दा ७ करोड ४६ लाखले बढी रहेको छ । यो प्रवृतिलाई आधार मान्दा आगामी हप्ता (पुस २९ गतेदेखि माघ ४) सम्म बजार थोरै ओरालो वा न्यूट्रल जोनमा रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजारमा कुनै प्रभाव पर्ने सुचना आएमा वा पुस मसान्तको असर देखा परेमा परिसूचक तलमाथि जान सक्छ ।
साताका सर्वाधिक १० कम्पनीको बजार पूँजीकरण
परिसूचकको मासीक तुलना
मङ्सिर २४ गते र पुस २६ गतेको तुलना गर्दा नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव ६५ अंकले बढ्न पुगेको छ । नेप्से ३ दशमलव २० प्रतिशतले बढेको हो । मङ्सिर २४ गते १ हजार १ सय ४४ दशमलव १९ विन्दुमा बन्द भएको थियो । मङ्सिर २४ गते र पुस २६ गतेको तुलनामा कारोबार रकम १६ दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम रू. ७ करोड ४ लाखले घटेको हो ।
यो साता नेप्सेमा चार कम्पनीको गरी कुल ११ करोड १५ लाख ३० हजार ५ सय ३१ दशमलव ४४ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ । अपर तामाकोशि हाइड्रोपावरको शेयर आइतवारदेखि कारोबार हुने भएको छ ।